कर्मचारी व्यवस्थापन गन्जागोल : कतै कामको चापाचाप, कतै फुर्सदले हाइसन्चो !
काठमाडौं – ललितपुर मालपोत कार्यालय लगनखेलमा सेवाग्राहीको चाप धेरै हुन्छ । साँझ सरकारी समय सकिन लाग्दासम्म पनि सेवाग्राहीको काम सकिँदैन ।
अपराह्न साढे ४ बजे कार्यालयमा भेटिएका अधिकृत सुबोध खनालले भने, ‘बिहानदेखि पिसाब फेर्न समेत पाइँदैन, कार्यकक्षमा सेवाग्राही आएका आयै हुन्छन् ।’
हिमाली जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाहेक देशका अधिकांश मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी नै हुन्छ । सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयबाट छिटो र सहज सेवा लिने कुरा कठिन नै हुन्छ । मालपोत कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीलाई पनि कार्यालय समयमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन चापाचाप हुन्छ ।
साँझ ५ बजेसम्म पनि कार्यालयमा सयौंको संख्यामा सेवाग्राही हुन्छन् । सबै कार्यकक्षका कर्मचारी थकित देखिन्छन् । मालपोत कार्यालयको सेवालाई छिटो र सहज बनाउने सन्दर्भमा कार्यालय प्रमुख भिमकान्त पौडेलले भने, ‘यो संरचना र दरबन्दी धेरै पुरानो हो, त्यसपछि जनसंख्या कति वृद्धि भयो तर संरचना र दरबन्दी उही नै छ । सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिन त खोजिराखेका छौं तर गाह्रो भइरहेको छ । कम्तिमा ३ वटा शाखा र थप ५० जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न सकिएमा बल्ल छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’
सरकारले ललितपुरकै एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय खोलेको छ । संख्यात्मक रुपमा थोरै ७ जना कर्मचारी कार्यरत भएपनि अधिकांश कर्मचारी फुर्सदिला छन् । सेवाग्राहीको खासै प्रत्यक्ष सरोकार नहुने भएका कारण कर्मचारीले काम पाएका छैनन् ।
बरण्डामा घाम ताप्दै पानीजहाज कार्यालयका कर्मचारी !
राजधानीमै सेवाग्राहीको खासै चाप नहुने कार्यालय हो गोश्वारा हुलाक कार्यालय काठमाडौं । तर कार्यालयमा ३ सय ६० कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीलाई काम छैन, फुर्सदिला छन् ।
इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगको वृद्धिसँगै व्यक्तिगत सूचना हुलाकमार्फत् आदानप्रदान गर्ने काम निकै घटेको छ । पछिल्लो समय कार्यालयमा नगन्य सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।
एउटा यस्तो सरकारी अड्डा जहाँ डिजिटल सिस्टम छ, सेवाग्राही आउँदैनन्
राजधानीमै कुनै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ भने कुनै कार्यालयका कर्मचारी फुर्सदिला । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरभित्रका मन्त्रालयका कर्मचारी दिनभर फेसबूक र यूट्यूबमा मस्त देखिन्छन् ।
अस्पतालमा समेत कर्मचारी अभाव
काठमाडौंको वीर अस्पतालमा नयाँ टिकट लिने काम, पुरानोमा अद्यावधिक गर्ने काम, एक्सरे, भिडियो एक्सरे लगायत सबै प्राविधिक काम गर्न निश्चित समय मात्रै तोकिएको छ । अस्पतालमा आवश्यक सरसफाइको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार डाक्टर उपलब्ध नगराएकाले वीर अस्पतालले डाक्टरलाई करारमा नियुक्त गरेको छ ।
अस्पतालमा आवश्यक संख्यामा नर्सको व्यवस्था छैन । बेवारिसे बिमारीको हेरविचार गर्न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था छैन । वीर अस्पतालका निर्देशक केदारप्रसाद सेन्चुरी भन्छन्, ‘यो अस्पताल १३० वर्ष पुरानो भइसक्यो । जनसंख्या दैनिक रुपमा बढिरहेको छ । हजारौंको संख्यामा दैनिक आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिन हामीलाई यो भौतिक पूर्वाधार नै अति साँघुरो भएको छ । हामीकहाँ कर्मचारीदेखि प्राविधिक सामग्रीहरूको धेरै समस्या छ । मन्त्रालयमार्फत धेरै पटक मागहरू राखिरहेका छौं । तर कार्यान्यनमा समस्या भइराखेको छ ।’
समायोजन सकिएपछि व्यवस्थापन हुने दाबी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘अहिले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको समयमा कर्मचारी वितरणको उचित सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । समायोजनको काम सकिएपछि आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीको व्यवस्था हुन्छ ।’
‘विषयगत कार्यालयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारको दरबन्दीको लागि आफैं पनि पहल गर्नुपर्छ । अबको हकमा केन्द्र्रको जिम्मेवारी परेको हकमा केन्द्रले व्यवस्था गर्ने अरु तहको जिम्मेवारी परेको कार्यालय परेको हकमा अरु सम्बन्धित तहले व्यवस्थापन गर्ने हो,’ तामाङले भने ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवद्वारा चीनको प्रसंशा बेइजिङ- संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्र संघका कामहरूको अभिन्न अङ्ग बन्दै आएकोमा चीनको प्रसंशा गर्नुभएको छ । चीनले बहुपक्षीयतावादको खम्बा रहेर विश्व समुदायबी...